ALAKAMISY 5 MAY - ALAROBIA 11 MAY 2022
KITRA CAN 2015 : Notsindrian’ny Barea ny Cranes Ouganda tamin’ny lalao mandroso
Tsara aloha ny vokatra azon’ny ekipam-pirenena malagasy nandritry ny lalao savaranonando izay natao teny amin’ny kianja Rabemananjara, ny alahady lasa teo. 20 mai 2014
Tafiditra amin’ny fiadian-itoerana amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Can 2015 ny fihaonan’ny Barea sy ny Cranes Ouganda.
Nanindry ny Malagasy tamin’ny 45 minitra voalohany izay nahatafidiran’izy ireo baolina roa. Tany amin’ny minitra faha-8 no niditra ny baolina voalohany, tamin’ny alalan’ny penalty nodakain’i Faneva Ima. Mbola nitohy hatrany ireo karazana tolotra tsara tarehy avy tamin’ireo mpilalao malagasy indrindra fa i Baggio, irakiraka afovoany. Nahitam-bokany izany tany amin’ny minitra faha-26, satria dia nahatafiditra ny baolina faharoa ho an’ny Barea indray i Carolus.
Nanova paikady ireo mpilalaon’ny Cranes Ouganda tamin’ny fidirana faharoa. Nanindry izy ireo nandritry ny 10 minitra tamin’ny fizaram-potoana faharoa. Sahirana ireo mpilalaon’ny Barena tamin’izany saingy soa fa tsy nisy ny baolina matin’ireo vahiny. Nivadika indray ny rasa avy eo ka nahazo tolotra ihany koa i Gladyson saingy tsy maty izany na dia efa izy sy ny mpiandry tsatokazo aza sisa no nifanehitra.
Tany amin’ny minitra faha-64 no nanao hadisoana tao anatin’ny faritra tsy azo ivalozana indray i Watenga Isma mpiandry tsatokazon-dry zareo vahiny rehefa nitondra baolina i Carolus. Nahazo penalty ny Barea saingy navotsotr’i Faneva Ima izany. Taorian’izay dia niha nahazo vahana ny ekipan’ny ouganda ary nitady hirika ny hampidiram-baolina hatrany. Tany amin’ny segaondra farany tsy hifaranan’ny lalano dia nanao hadisoana tsy nahy i Francois mpilalao malagasy izay nisambotra baolina tamin’ny tanana ka dia nahazo penalty ry zareo vahiny ary dia nahazo isa iray izy ireo.
Isa 2 no ho 1 no nisarahan’ny roa tonta. Miankina amin’ny lalao miverina izay hatao
an’i Ouganda no mety hamaritra ny ho avin’ny ekipa malagasy.
ALAKAMISY 5 MAY - ALAROBIA 11 MAY 2022 (0) 17 mai 2022 “Tsy maintsy hotanterahina ny autoroute”, hoy ny Filoha Rajoelina LALANA TOAMASINA-ANTANANARIVO (0) 17 mai 2022